यस्ताे अवस्थामा भेटियाे बर्दियामा बाघले मोटरसाइकलबाटै झम्टिएर लगेको महिलाको श’व, सबै स्तब्ध — Sanchar Kendra
यस्ताे अवस्थामा भेटियाे बर्दियामा बाघले मोटरसाइकलबाटै झम्टिएर लगेको महिलाको श’व, सबै स्तब्ध
काठमाडाैं । कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका वडा नं. ४ कौवापुरकी ५० वर्षीया नन्दकली थापाको श’व फेला परेको छ। थापालाई गएराति बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बाघले मोटरसाइकलबाटै झ’म्टिएर लगेको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी योगेन्द्र खड्काले शनिबार मध्यान्ह १२ बजेतिर थापाको श’व घटनास्थलनजिकै फेला परेको बताए। ‘घट’नास्थलभन्दा तीन सय मिटर दक्षिण पश्चिमा उहाँको श’व फेला परेको छ,’ डिएसपी खड्काले भने, ‘बाघले अनुहार र दुबै पिडौला खाएको छ। देब्रे खुट्टा शरीरदेखि अलग गरेको अवस्थामा श’व फेला परेको छ।’
शुक्रबार राति पूर्व बाँकेको कोहलपुरबाट पश्चिम कैलालीस्थित घर जान लागेका आमा छोरा सवार मोटरसाइकलमा बाघले झ’म्टिएर थापालाई घिसार्दै जंगलमा लगेको थियो। मोटरसाइकल उनका छोरा २२ वर्षीय सन्तोष थापाले चलाएका थिए।
शनिबार बिहानैदेखि थापाको खोजीका लागि नेपाली सेनाको टोली, नेपाल प्रहरीको टोली र निकुञ्जको टोली खोजीमा खटिएपछि थापाको शव बाघले खाएको अवस्थामा फेला परेको डिएसपी खड्काले बताए। बाघले गुडिरहेको मोटरसाइकलमा झ’म्टिएर मानिस मारेको यस्तो घटना हालसम्म नेपालमा सुनिएको थिएन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रातको समयमा मोटरसाईकल र साइकलमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। शनिबारदेखि लागू हुने गरि बेलुका ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मोटरसाईकल, साईकल, अटो रिक्सा जस्ता साना सवारी साधान सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले जानकारी दिए।
दिउँसोको समयमा पनि एक्लाएक्लै यात्रा गर्न नदिने र सवारी चालकहरू दशवटा जम्मा भएपछि मात्रै यात्रा गर्न दिने नियम लागू गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए।
मोटरसाईलकमा सवार महिलालाई बाघले झम्टिएर मारेपछि मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यस्तो नियम लागू गर्नुपरेको अधिकारीले बताए। बाघको आ’क्रमणबाट मृत्यु भएकी कैलाली लम्किचुहा नगरपालिका-४ कौवापुरकि ५० वर्षिया नन्दकली थापाको शव आफन्तले बुझेका छन्।
इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रमुख डीएसपी दिपक श्रेष्ठले गाडी र सर्लाही निवासी चालक मिश्रलाई नियन्त्रणमा लिएर निकुञ्जको जिम्मा लगाइएको बताए । ‘तीव्र गतिमा आइरहेको कारमा बाघले जम्प गर्ने क्रममा चक्कामुनि आएको चालकले बयान दिएका छन्,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘यसको थप अनुसन्धान निकुञ्जले गर्ने छ ।’
काठमाडौंमा ८ जना पैदलयात्रीको मृत्यु
पछिल्लो एक सातामा काठमाडौं उपत्यकामा बाटो काट्ने क्रममा ३ जनाको निधन भयो । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार ललितपुरको सातदोबाटो–ग्वार्काे सडकखण्डको बीएण्डबी अस्पताल अगाडि दुईजना र भक्तपुरमा एक जनाको ज्यान गएको हो ।
योसँगै सवारी दुर्घटनासहित जोड्दा पछिल्लो १५ दिनमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ पुगेको छ ।
गत बिहीबार ग्वार्काेको बीएण्डबी अस्पताल अगाडि आकाशेपुल मुनिबाट बाटो काटिरहेका अस्पतालका दुईजना कर्मचारीले टाटा सुमोको ठक्करबाट ज्यान गुमाए । बत्तीविहीन आकाशे पुलमा हिँड्न असुविधा भएपछि सो ठाउँमा अधिकांश त्यसमुनिबाट सडक पार गर्छन् ।
माइतीघर–बानेश्वर, रत्नपार्क–भद्रकाली–सिंहदरबार खण्डको भद्रकाली लगायतको आकाशेपुल छेउबाट धेरैले असुरक्षित रुपमा बाटो काट्ने गरेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश आकाशेपुल खाली हुन्छन् । रत्नपार्क लगायत क्षेत्रका आकाशेपुल व्यापारिक अड्डा बनेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार जेब्रा क्रसिङ र आकाशेपुल जथाभावी बाटो काट्नेहरूमाथि असुरक्षा बढेको छ । बिहीबारको दुर्घटनामा चाहिँ बत्ती नभएकाले पैदलयात्रुले आकाशेपुल प्रयोग नगरेको ट्राफिक प्रहरीको ठहर छ ।
त्यसो त काठमाडौंका सडकमा पैदलयात्रीको सुविधालाई ध्यानमा राखिएको छैन । त्यसमाथि पैदलयात्रीहरु आफैंले लापरबाही गर्छन् । यसबाट दुर्घटना बढेको सडक सुरक्षासम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन् । काठमाडौंका चौडा सडकमा सवारीको गति तीव्र हुन्छ । त्यसैबीचमा पैदलयात्रुले लापरबाही गर्दै बाटो काट्दा धेरै दुर्घटना हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
पैदल यात्रुमैत्री पूर्वाधार नबनेको सडकमा यात्रुहरूले पनि लापरबाही गर्ने गरेको सडक सुरक्षासम्बन्धी जानकार पदमबहादुर शाही बताउँछन् । पैदलयात्री र सवारी चालकको लापरबाहीले सडक दुर्घटना बढेको उनले बताए ।
‘दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढीरहँदा सरकारी स्तरबाट कमीकमजोरीको कारण खोजी नहुनु अर्को दुःखद् पक्ष छ’, शाही भन्छन्, ‘पैदल यात्रु त सबै पैदलयात्रु नै हुन्, सवारी धनीहरू पनि तरकारी किन्न जाँदा पैदलयात्री नै हुन्छन् ।’ सरकारले सडक र सवारीमा जति लगानी गरे पनि पैदलयात्रीको सुरक्षालाई बेवास्ता गरेको उनी बताउँछन् ।
२० वर्ष पहिले फुटपाथको प्रावधान नै नरहेको सम्झदै शाही भन्छन् ‘अहिले फुटपाथ बनाउँदै गइयो तर खाल्डोमा पुर्याएर फुटपाथको अन्त्य गरिएको छ । यो पनि सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण हो ।’
आकाशेपुल वा जेब्रा क्रसिङबाट बाटो नकाट्ने पैदलयात्रीको प्रवृत्ती पनि ठूलै समस्या भएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘पैदलयात्रुकै सुविधाका लागि बनाइएका संरचनाहरु चाहिँ कि रित्ता रहन्छन् कि त त्यहाँ व्यापार चलेको हुन्छ ।’
सहरी पूर्वाधार विज्ञ डा. किशोर थापा काठमाडौंमा जथाभावी बाटो काट्नु पैदलयात्रीको बाध्यता भएको बताउँछन् । स्थानीय सरकारले जेब्राक्रसिङको साटो आकाशेपुल बनाएका छन्, जुन तन्नेरीहरूबाहेक अरूलाई उपयुक्त नहुँदा धेरैजना सीधा सडकतिर लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
अर्काेतर्फ चालकहरू पनि आकाशेपुल भएपछि पैदलयात्रीहरू त्यतैबाट मात्र जान्छन् भन्ने हिसाबले तीव्र गतिमा सवारी चलाउँछन् । त्यसैले सबैलाई उपयुक्त हुनेगरी जेब्रा क्रसिङ बनाउन थापाको सुझाव छ ।